Indlu ethe cwaka ekufutshane nePrestwold kunye neLoughborough - I-Airbnb
Indlu ethe cwaka ekufutshane nePrestwold kunye neLoughborough
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguAdena
Le yiflethi ezimeleyo ecaleni kwendlu enkulu.
Indawo isekupheleni komkhondo wefama kwindawo ethe cwaka efihlakeleyo-iBurton Bandalls (kwi-B676, eLoughborough Rd phakathi kwePrestwold & Cotes). 5 min drive / 20 min ukuhamba ukuya ePrestwold Hall. Imizuzu emi-5 ukuya kwisikhululo sikaloliwe saseLoughborough. Imizuzu eyi-10 ukuya kwiYunivesithi yaseLoughborough. I-10 min drive ukuya kwi-Great Central Steam Railway. Imizuzu engama-25 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya sase-East Midlands, imizuzu engama-30 ukuya eLeicester, imizuzu engama-30 ukuya eNottingham, imizuzu engama-45 ukuya kwi-NEC kunye nemizuzu engama-60 ukuya eBirmingham.
Le ndawo inegumbi lokulala eliphindwe kabini elinegumbi lokuhlambela le-en-suite kunye nekhitshi / indawo yokuphumla. Konke kumgangatho ophantsi. Isango lokungena lahlukile kwindlu enkulu, lijikelezwe ngumhlaba wasefama. Prestwold Hall kufutshane.
Ime ekupheleni kwendlela yasefama eneendawo zokupaka.
4.90 · Izimvo eziyi-395
Sikwindawo yasemaphandleni ngaphakathi kohambo lwemizuzu emi-5 eLoughborough. Iilali ezikufutshane yiCotes, iHoton, iBurton-on-the Wolds kunye neBarrow-Upon-Soar. Ilungele kakhulu iPrestwold Hall kunye neStanford Hall.
Umbuki zindwendwe ngu- Adena
Sihlala kwindlu ephambili ke siya kuba sesizeni kodwa asizimiselanga kukhathaza iindwendwe. Sinenja yelabrador kunye nepikoko lundwendwe oluqhelekileyo.
Kuyasivuyisa ukuba sikwazi ukunika indawo yokuhlala apho izinja zamkelekile njengoko sinedokhi enkulu evalelweyo ezinokuthi zibaleke kuyo. (Sibiza i-£ 5.00 eyongezelelweyo) Nangona kunjalo, ukuba bangena ngaphakathi kwindlu siyakucela ukuba ubagcine kwi-kennel ebonelelwe njengoko iflethi inekhaphethi kwaye oku kuthintela ukucoca okungaphezulu.
Kuyasivuyisa ukuba sik…